कसरी डिज्नी प्लस सदस्यता रद्द गर्ने? - मनोरञ्जन
डिज्नी प्लस एक स्ट्रिमिंग प्लेटफर्म हो जुन एक मध्ये एक भएको छ अग्रणी स्ट्रिमिंग सेवा प्रदायकहरु। उनीहरूसँग छ चलचित्र र टिभी श्रृंखलाहरूको विशाल संग्रह जुन तपाईं हेर्न मनपर्न सक्छ। तर यदि तपाईलाई लाग्छ कि सेवा तपाईले खोज्नु भएको कुरा होईन भने तपाई यसलाई कुनै पनि समय रद्द गर्न सक्नुहुन्छ। अनावश्यक शुल्कहरू जोगिन, तपाईंले बिलि date मिति समाप्त हुनु अघि यसलाई रद्द गर्नु पर्छ।
तपाईं सजिलैसँग आफ्नो वेब ब्राउजर प्रयोग गरेर तपाईंको सदस्यता रद्द गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईंको डिज्नी प्लस सदस्यता तपाईंको हालको बिलि date मितिको अन्त्य सम्म मात्र रहनेछ जसको अर्थ तपाईंले सदस्यता रद्द गरे पछि पनि तपाईंले भुक्तानी गरेको सबै हेर्न अझै सक्षम हुनुहुनेछ।
सामान्यतया, डिज्नी प्लस को लागी सदस्यता हालमा मासिक $ 6.99 को लागि वा सम्पूर्ण वर्ष को लागी about 69.99 को लागी छ। तपाई के गर्न सक्नुहुन्छ, तपाईले एक प्रयास दिन सक्नुहुन्छ तपाईले सदस्यता लिनु भन्दा पहिले नि: शुल्क days दिनको परीक्षण अवधि त्यसो भएमा, तपाईं परीक्षणको माध्यमबाट देख्न सक्नुहुनेछ यदि सेवाहरू जुन तपाईंले खोजिरहनु भएको थियो र यदि यो मार्कमा छ भने। दिमागमा राख्नुहोस् कि यदि तपाइँ सदस्यता रद्द गर्ने योजनामा ​​हुनुहुन्छ भने तपाइँले परीक्षण अवधिको अवधिमा सदस्यता रद्द गर्नुपर्नेछ त्यसपछि तपाइँलाई सदस्यताको लागि चार्ज गरिने छैन।
जहाँसम्म, यदि तपाईंले सदस्यता अवधि समाप्त भएपछि सदस्यता रद्द गर्नुभयो भने, तपाईंको सदस्यता अर्को बिलि date मिति सम्म जारी रहनेछ जुन यसको मतलब यो महिनाको अन्त्यसम्म काम गर्दैछ यदि तपाईंले मासिक योजनाको लागि रोज्नु भएको छ र यो हुन सक्छ को लागी बर्ष को अन्त्य सम्म यदि तपाइँ वार्षिक विकल्प को लागी रोज्नु भएको थियो। दुबै केसहरूमा तपाईलाई पूरै महिनाको लागी $ 99.99 or वा तपाईले रोज्नु भएको योजनाको आधारमा पूरै बर्ष $।। .99। शुल्क लाग्ने छ।
नि: शुल्क IPTV कसरी पाउने?
कसरी तपाइँ तपाइँको डिस्ने प्लस सदस्यता रद्द गर्न सक्नुहुन्छ?
आधिकारिक वेबसाइटको भ्रमण गर्नुहोस् र प्रोफाइल मुनि खातामा क्लिक गर्नुहोस्।
जब तपाईं त्यहाँ पुग्नुहुन्छ, तपाईंले बिलि Details विवरणहरूमा क्लिक गर्नुपर्नेछ। त्यहाँबाट, तपाईं आफ्नो सदस्यता रद्द गर्न विकल्प देख्नुहुनेछ।
तपाईं स्क्रिनमा पूर्ण रद्द विकल्प प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ जुन तपाईंको वर्तमान बिलि cycle चक्र समाप्त नभएसम्म तपाईंसँग कति दिनहरू हुन्छ भनेर देखाउँदछ। र तपाईं त्यहाँ गर्नुभयो। अर्को स्क्रिनले सोध्नेछ कि किन तपाईंले आफ्नो सदस्यता रद्द गर्ने निर्णय गर्नुभयो।
त्यो हो। तपाईले सक्नुभयो। तपाईंले रद्द गर्ने पक्का ईमेल पनि प्राप्त गर्नुहुनेछ। यदि तपाईंले आफ्नो दिमाग परिवर्तन गर्ने निर्णय गर्नुभयो भने, ईमेलमा सदस्यता पुनःस्टार्ट गर्नुहोस् बटनमा क्लिक गर्नुहोस् तपाईंको सदस्यता पुनः सुरु गर्न।
तपाइँ कसरी तपाइँको नि: शुल्क डिस्ने प्लस परीक्षण रद्द गर्न सक्नुहुन्छ?
प्रक्रिया उस्तै छ। यदि तपाइँ तपाइँको पहिलो बिलि date मिति भन्दा पहिले यसलाई रद्द गर्न जाँदै हुनुहुन्छ भने, तपाइँ तपाइँको एकल पैसालाई चार्ज नगरीकन तपाइँको परीक्षणको मजा लिन जाँदै हुनुहुन्छ। तपाईंले यसका बारे सन्देश प्राप्त गर्नु हुनेछ जब उनीहरू पहिलो पटक तपाईं लाई डिज्नी प्लस मार्फत तपाईंको क्रेडिट कार्ड विवरण प्रविष्ट गर्न सोध्छन्।
तपाईंको आईफोन सेटिंग्समा डिज्नी प्लस सदस्यता रद्द गर्न सेटिंग्स:
यदि तपाईंले डिस्ने प्लस सदस्यतामा तपाईंको आईफोन वा कुनै अन्य एप्पल उपकरण प्रयोग गरेर साइन अप गर्नुभएको थियो। त्यो अवस्थामा, तपाईंले एक एप्पल उपकरण प्रयोग गर्नुपर्नेछ यदि तपाईं आफ्नो सदस्यता रद्द गर्न चाहानुहुन्छ भने। तर, त्यो गर्न सजिलो छ। तपाईं यी चरणहरू अनुसरण गर्न सक्नुहुन्छ तपाईंको डिस्ने प्लस सदस्यता रद्द गर्न तपाईंको आईफोन वा कुनै अन्य एप्पल उपकरण प्रयोग गरेर।
तपाईंको उपकरणमा सेटिंग्स अनुप्रयोग खोल्नुहोस्।
शीर्षमा तपाईंको नाममा क्लिक गर्नुहोस्।
त्यहाँबाट सदस्यता चयन गर्नुहोस्।
Disney Plus मा क्लिक गर्नुहोस्।
त्यहाँबाट सदस्यता रद्द गर्नुहोस् मा क्लिक गर्नुहोस्।
नोट: वेब ब्राउजरबाट डिस्ने प्लस सदस्यता रद्द गर्न सजिलो छ।
तपाईंको एन्ड्रोइड फोनमा गुगल प्ले स्टोरमा कसरी डिस्ने प्लस सदस्यता रद्द गर्ने?
यदि तपाईंले गुगल प्ले वा एन्ड्रोइड उपकरण प्रयोग गरी डिस्ने प्लसको सदस्यता लिनुभयो भने, सदस्यता रद्द गर्नु एकदम सजिलो छ।
सर्वप्रथम, तपाईंले आफ्नो एन्ड्रोइड उपकरणमा गुगल प्ले स्टोर अनुप्रयोग खोल्न आवश्यक छ।
मेनूमा क्लिक गर्नुहोस् र त्यहाँबाट सदस्यता चयन गर्नुहोस्।
डिस्ने प्लस चयन गर्नुहोस्।
सदस्यता रद्द क्लिक गर्नुहोस्।
तपाईंको डिज्नी प्लस खाता रद्द गर्नु एकदम सरल छ जबसम्म तपाईंलाई थाँहा छ कि तपाईंले त्यसलाई उस्तै प्रकारको उपकरण प्रयोग गरी रद्द गर्नु पर्छ जुन तपाईंले साईन अप गर्न प्रयोग गर्नुभएको थियो। यसको अर्थ, यदि तपाइँ डिस्ने प्लसमा साइन अप हुनुभएको छ या त तपाइँको पीसी वा ल्यापटपमा वेब ब्राउजर प्रयोग गरेर, तपाइँले डिज्नी प्लस सदस्यता रद्द गर्न उस्तै उपकरणमा साइन इन गर्न आवश्यक छ।
एकचोटि तपाईंले आफ्नो सदस्यता रद्द गर्नुभयो भने, तपाईं अझै पहुँच गर्न सक्नुहुनेछ तपाईंले बिलिilling चक्रको अन्त्य नपुगुञ्जेल सम्म। त्यसोभए यदि तपाइँ तपाइँको सदस्यता रद्द गर्ने योजना गर्दै हुनुहुन्छ, तपाइँ एक चक्र पछि यसलाई गर्न निश्चित गर्न चाहानुहुन्छ, त्यसैले तपाइँसँग अझै अर्को महिना हेर्नको लागि छ। र यदि मामला मा तपाईं आफ्नो मन परिवर्तन र फेरि सुरु गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईं सधैं पछि फेरि साइन अप गर्न सक्नुहुनेछ अन्तहीन श्रृंखला हेर्नका लागि।
प्लूटो टिभी विकल्पहरू
नि: शुल्क अमेजन उपहार कार्ड पाउनुहोस्
प्लूटो टिभी सामसु smart स्मार्ट टिभीमा काम गरिरहेको छैन
नि: शुल्क अंग्रेजी फिल्म डाउन लोड
एपिसोडहरू नि: शुल्क हेर्दै
कसरी हाजिर छात्र छूट प्राप्त गर्न
नि: शुल्क फिल्महरू अनलाइनका लागि उत्तम वेबसाइटहरू